Wiko Tommy 3, Lenny 5 iyo Jerry 3: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilawga | Androidsis
Waxa ugu xiisaha badan ee ku saabsan MWC 2018 ayaa ah inuu inaga tagayo noocyo fara badan oo xagga taleefannada ah. Tan iyo markii aan la kulanay dhammaan noocyada noocyada ee jooga munaasabadda caanka ah ee Barcelona. Sidaas maalmahan oo dhan waxaan ka heli nafteena ka ugu-laayeen-dhamaadka sare-ilaa -dhamaad hoose leh Android Go sida nidaamka qalliinka. Hadda waa wareegga seddex moodal oo ah xadka ugu dambeeya, dhammaantood waxay ka yimaadeen Wiko.
Soo-saaraha ayaa sidoo kale jooga munaasabadda caanka ah. Waxay horey u soo bandhigtay seddexdeeda telefoon ee cusub ee dhamaadka hoose, dhammaantood waxay la shaqeeyaan Android Go. Magacyadoodu waa Tommy 3, Lenny 5 iyo Jerry 3 oo waxaan horey u ognahay qeexitaankiisa. Waxbadan ayaan idinkugu sheegi doonaa hoos.
Wiko ahaan, xadka hoose uma baahna inuu noqdo mid liita ama leh qeexitaanno ka tagaya waxyaabo badan oo la doonayo. Soo saaraha Faransiiska wuxuu doonayaa inuu beddelo sawirka dhammaadka hoose ee adeegsadayaal badan oo leh kuwaan Tommy 3, Lenny 5 iyo Jerry 3. Maaddaama aan la kulanno taleefannada leh qeexitaanno ka badan dareeraha. Waxaan ka hadleynaa moodal kasta shaqsi ahaantiisa.
Waan kulannaa ka hor dhexda saddexda moodel in summaddu soo bandhigtay. Waa aalad wadaagaysa qeexitaanka labada telefoon ee kale ee Wiko uu ku soo bandhigay MWC 2018. Waxay la shaqeysaa Android Go sidoo kale waxay leedahay shaashad 18: 9. Marka waxaan aragnaa sida naqshadeynta ay waliba muhiim ugu noqotay soo gelitaanka. Kuwani waa qeexitaankiisa:
Faahfaahinta farsamada Wiko Tommy 3
Tusaale Tommy 3
Nidaamka hawlgalka Daabacaadda Android Go Oreo
Screen 5.45 inji IPS oo leh saamiga 18: 9 iyo xalka 960 x 480 pixels
Gacaliye Quad Core Cortex A53 1.3Ghz
Kaydinta gudaha 16GB (La ballaarin karo ilaa 128GB)
Kaamirada gadaal 8 MP
Kaamirada hore 5 MP
Tilmaamo kale NFC
Batariga 2.500 Mah
Qiimaha Ku dhowaad 100 euro
Kaalinta labaad waxaan ka helnaa qaabka ugu yar saddexda in soo saaraha Faransiiska soo bandhigay. Sidoo kale waa ka ugu raqiisan dhamaan. In kasta oo shirkaddu aysan uga hoos bixin faahfaahinteeda. Tan iyo markii aan mar kale ku kulanno taleefan kaas Waxay leedahay shaashad 18: 9 iyo waliba Android Go Oreo Edition sida nidaamka qalliinka. Kuwani waa qeexitaannada Wiko Jerry 3:
Faahfaahinta farsamada Wiko Jerry 3
Tusaale Jerry 3
Screen 5.45 Inch IPS oo leh saamiga 18: 9 iyo xalka 960 x 480
Gacaliye Quad Core Cortex A7 1.3Ghz
GPU 400MP2 yar
Kaydinta gudaha 16GB (La ballaarin karo ilaa 64GB)
Kaamirada gadaal 5 MP
Qiimaha 79 euros
Meesha seddexaad waxaan ka helnaa midka ugu weyn ee saddexda nooc ee astaanta. Waxay leedahay shaashad ka ballaaran tan labadeeda walaalo. Intaa waxaa dheer in la haysto qeexitaanno dheeri ah. Tusaale ahaan a batari ka weyn iyo sidoo kale nal kaamirada dambe. Haddii kale, qeexitaankiisu wuxuu ilaaliyaa isku ekaanshaha kuwa moodooyinka kale. Iyo shaashadda 18: 9 ayaa soo noqota si muuqaal loo sameeyo. Kuwani waa Wiko Lenny 5 qeexitaanno:
Faahfaahinta farsamada Wiko Lenny 5
Tusaale Lenny 5
Screen 5.7 inji IPS oo leh saamiga 18: 9 iyo xalka 1440 x 720
Gacaliye Quad-core Cortex A7 1.3GHz
Kaamirada gadaal 5 Xildhibaan + Flash
Kaamirada hore 8 MP
Tilmaamo kale Ku hadla idaacadaha
Batariga 2.800 Mah
Qiimaha Qiyaastii 100 euro
Xilligan waxba lagama sheegin taariikhda la sii daynayo ee mid ka mid ah saddexda nooc. Marka macno ahaan waa inaan ka sugno xoogaa xaqiijin shirkadda ah. Waxaan rajeyneynaa inaan dhowaan kaa maqalno, laakiin ma ogin goorta macluumaadkan la soo bandhigi doono. Laakiin waxaan dhageysan doonnaa warar kasta oo arrintaas la xiriira.
Qiimaha, Lenny 5 iyo Tommy 3 labaduba waxay noqon doonaan ilaa 100 euro. Waxaa laga yaabaa in mid uun ka hooseeya mid kalena uu ka sarreeyo 100 euro. In kasta oo aan la ogeyn qiimaha ugu dambeeya ee ay labada taleefan yeelan doonaan. Laakiin shaxdani waxay u adeegtaa hage ahaan. Xaaladda Jerry 3 qiimaha wuxuu noqon doonaa 79 euro. Waxay u muuqataa in qiimahan la xaqiijiyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Wiko Tommy 3, Lenny 5 iyo Jerry 3: Nooca ugu hooseeya sumadda ee leh Android Go